ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Twitter ကိုမေတ္တာအကြောင်းသင်သှနျသငျနိုင်သလားဘယ်အ?
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, social networking site များ, ဖြစ်နိုင်သူတို့လွတ်လပ်သည့်အခါလူတို့သည်မိမိတို့၏အချိန်အများစုကိုဖြုန်းရှိရာနေရာများ.
ဒါကြောင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်သုံးစွဲလေ့ရှိသည်အချိန်ရှိသမျှကိုအခြေအမြစ်မရှိသော chitchats နှင့်အတင်းအဖျင်းနှင့်အတူအသုံးမကျဖြစ်အံ့သောငှါထွက်လာလှည့်မှန်ပေမယ့်နေစဉ်, အချိန်များတွင်လူသည်ဤ websites မှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နှင့်အရေးကြီးသည်အမှုအရာတွေအများကြီးလေ့လာသင်ယူတက်အဆုံးသတ်. ဥပမာအားဖြင့်, အသစ်များနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုချက်ပြုတ်နည်းများကိုဆက်ကပ်ကြောင်းလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများတွင်ရှိပါတယ်, နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ခေတ​​်ရေစီးကြောင်းအကြောင်းလူပညာပေးသောစာမျက်နှာများ, နောက် ... ပြီးတော့.
ထိုအခါ, တစ်ဦးကလူမှုရေးကွန်ယက်၏ပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ပဲသင်ယူနိုင်ပါတယ်တချို့သင်ခန်းစာတွေရှိတယ်; အောက်တွင် Twitter ကိုသှနျအချို့မေတ္တာကိုသင်ခန်းစာတွေကို micro-ဘလော့ဂ်ဆိုက်များမှာ.
1. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အတူတကွနေရခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ရုံတင်မက:
ဒီဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက်ချစ်သူ Justin Gaston နှင့်အတူသူမ၏ပြိုကွဲစဉ်ကာလအတွင်း Twitter ကိုတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေး၏တသင်ခန်းစာ Miley Cyrus ဖြစ်ပါသည်, 2011. ပြိုကွဲကြေညာခြင်း micro-ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိ, ကုရုဘယ်တော့မှမကြီးစွန်းတိုင်အောင်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုကဲ့သို့ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းရှိသည်မဟုတ်နိုင်ဟုဆိုသည်.
ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး Hanna Montana ၏ယခင်ကြယ်ပွင့်သွားလာရင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မေတ္တာကိုဖော်ပြခြင်း၏အခြားလမ်းကြောင်းထည့်သွင်း. ဒီလူအပေါင်းတို့သည်ကြီးမားသောမေတ္တာတော်ကိုသင်ခန်းစာဖြစ်သည်, ငယ်ရွယ်သို့မဟုတ်အသက်ကြီး.
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုချစ်လျှင်, သူ / သူမသွားကြကုန်အံ့ဘယ်လိုသင်သိရမယ်. ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင်ချစ်သောသူသို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူရှိကိုဆက်လက်မပေးလိုပါဘူးဆိုရင်, သင်သည်သူ / သူမ၏ဇွတ်အတင်းကိုပြုစေလိုသောဘယ်တော့မှမပေးသင့်; သင်သည်ထိုလူတစ်ဦးချစ်ကြလျှင်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်, အကယ်စင်စစ်သင်သည်သူ့ကိုသူ / သူမပျော်ရွှင်မြင်ချင်လိမ့်မယ်.
မကြာသေးမီက Twitter ပေါ်မှာ Trending တစ်ဦး hash tag ဖြင့်လူရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်မပြောရသင့်သောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာစုရုံးကူညီခဲ့ရှိ၏. အဆိုပါ hash tag ဖြင့်ဤကဲ့သို့သောဝင်: #FiveWordsToRuinADate.
အသုံးပြုသူများအရက်စွဲတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကို ပတ်သက်. အကြံပြုချက်များ၏နံပါတ် posted. သူတို့အားအကြံပြုချက်များ၏အချို့ကိုသတိရကယ့်ကိုထိုက်တန်ခဲ့ကြ.
ဥပမာအားဖြင့်, Matt Lieberman, AfterBuzz ကို TV များအတွက်ဟာ host အဘယ်သူသည်, သူ့အဆိုအရနေ့စွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာငါးခုစကားများဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့သည် “သင်သည်ငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲတူနမ်းပါ”. အဘယ်အရာကို Lieberman ပြောချင်ပါကသင့်ရဲ့အချက်အလက်အသစ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့မျက်နှာစာ၌သင်တို့၏အတိတ်အကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ကြီးမားတဲ့အမှားင်ခဲ့သည်.
နောက်ထပ်ဥပမာအားဖြင့် Tweet ဖြစ်ပါသည် က Jeff Drake, စာရေးဆရာတစ်ယောက်. ငါးပါးတားမြစ်ထားသောစကားများ, သူ့အဆိုအရ, များမှာ “ငါ့ mom, ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနှင်နိုင်”. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းကြသောအခါလွှင့်တော်မူ၏လျှင်ဤကြေညာချက်ဟာကြီးမားတဲ့ spoilsport နိုင်ပါတယ်, သင်ကကောင်လေးများမှာအထူးသဖြင့်ဆိုရင်.
ဟုတ်ကဲ့, သင်သည်သင်၏ mom, ချစ်ရန်ညာဘက်ဧကန်အမှန်ရှိသည်, သို့သော်အများစုမှာမိန်းကလေးများသည်သူတို့၏အသက်တာတွင်ထိုလူကိုသူတို့ရဲ့ mom, ၏ကိုးကားသို့ဆောင်ခဲ့သို့မဟုတ်ပင်သူမနှင့် ပတ်သက်. အလွန်အမင်းပြောနေတာကြည့်ဖို့ကိုမုန်း.
တွစ်တာ Search bar မှာပေါ်ထားသည့်အသေးစိတ်၎င်း tag ဖြင့် #FiveWordsToRuinADate Enter; သင်သည်များစွာသောထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပြီးအသုံးဝင်သည့်အကြံပြုချက်များကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး.
3. Little ကအမှုအရာအံ့ဘွယ်သောအမှုပြုနိုင်သည်:
မေတ္တာသည်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုအကြောင်းဖြစ်သည်; အနည်းဆုံး Twitter ပေါ်မှာဆွေးနွေးမှုများဒါကြောင့်အကြံပြု. ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦး Tweet Patama ရေးသားချက်များအားဖြင့်မိန်းကလေးများနောက်ကွယ်မှပွေ့ဖက်လိုက်၏အတွေ့အကြုံချစ်ကြောင်းအကြံပြု.
ဤအမှုအရာအနည်းငယ်သာသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ချစ်ရသူခံစားရနှင့် Twitter သူတို့ကို၏ဤမျှလောက်များစွာသောသှနျစေနိုင်သည်.